Indlela yokulungisa ukulungiswa kwesohlo
Ubuhle bomfazi Iifake Iishiya
Ukuchazwa kakuhle, iinki eziqhelekileyo zingenza ummangaliso wangempela. Baya kuncedisa ukuqwalasela amehlo, bancede ukutshintsha ubuso bomzimba, kwaye uhlalutye ubuso obunqamlekileyo. Ngezihlandlo ezahlukileyo kunye nefashoni yolu hlobo okanye loo ndlela yeehiyo zahlukile. Namhlanje, iinki zihlobo olubanzi, kwaye ukuba lo bubanzi abuyanele, umgca kufuneka ube ngowona yendalo. Kodwa omnye umyalelo wawukho ngexesha lonke: kufuneka ukhangele iinki, uphume rhoqo, uzame ukufanisa ukuma kwawo kwimo yobuso, kwaye umbala udibene nombala weenwele. Indlela yokulungisa kakuhle i-eyebrow correction, siza kuxela kwinqaku lemihla.
Ngaphambi kokuba uqalise inkqubo yokubamba iilishi, kufuneka umntu abe nomgaqo owodwa: awukwazi ukuphazamisa ukuma kwemehlo. Amacangca amancinci kakhulu ayenzanga ukuya kubani na, aya kulahleka ebusweni obubanzi, oya kugxininisa ubunzima bawo, kwaye ukuba iinki zivaliwe, zingenza ubuso bubonakale bunzima bokubandezeleka okanye ukukhathazeka kwehlabathi. Awukwazi ukucima iilebe zakho phezulu. Ungasusa kuphela iinwele ezimbalwa ezibonakalayo ezikhangeleka.
Ububanzi, ubude kunye nokuguqa kwamacweba kubalulekile iimpawu zamehlo entle. Ngexesha elifanayo le parameters nganye ngabomfazi ngamnye, ukuchaza, kufuneka uhlale unamathela kubo.
Ukuba ufaka ipensela kumgca osebenzayo ukusuka kwiphiko lempumlo ukuya kwikona elingaphakathi kweso, le ngongoma iya kuba yiklasi lokuqala. Ingongoma ephakamileyo yelungu ichazwa ngale ndlela ilandelayo: ipencilisi isetyenziswe kumgca owakhiwa phakathi kwamanqaku amabini - isikhungo somlomo ophezulu kunye nomfundi. Kwinqanaba lokuthintela ipensela kunye neshiya, kwaye iya kuba yindawo ephakamileyo. Kodwa ukuphela kwehlohlo kufanele kube kumgca, owenza iphiko lempumlo kunye nekona langaphandle kwiso.
Izenzo ezinjalo ezivela kwiintsapho zobalo zobunjineli ziza kunceda ukwakha isiseko "sokudweba" kwamehlo amahle endalo yendalo. Kudingeka ukuba unqande iilebe zakho kwibhuloho yeempumlo zakho, ukwenzela ukuba ubuso bakho bubonakale bubuhlungu. Nika ingqalelo ekupheleni kweshiya, kuba ukuba umgca ude kakhulu, unokwenza ubuhlungu bubuhlungu ubuso, kwaye umfutshane kakhulu umgca ukhangelekile, iimbhobho ziya kulahlwa, ngokukodwa ngokucwecwe.
Xa isalathisi sakhiwe ngokwengqondo, ungaqhubeka kwinkqubo yokucoca. Lo msebenzi kufuneka uthathwe ngokufanelekileyo: qi niqiniseke ukuba uhlamba izandla ngeesepha kwaye uhlambe zonke iimpepha. Oku kuphelisa umngcipheko wokusuleleka.
Ulusu kwindawo yonyango kufuneka ludityanwe ngesandla, uze uqhubeke nokulungiswa. Okokuqala kufuneka ususe iinwele ezingafaki umgca weenki ngqo. Oku kuya kukunceda ukuba "kucacise insimu" kwaye kuya kuba lula kuwe ukucacisa indlela oyifunayo. I-eyebrow kufuneka ibe nomgca ophantsi kwaye wehla ngokuthe ngqo, kodwa ekugqibeleni ungaphenduli umtya ongabonakaliyo. Emva kokuphela kokulungiswa, iilishi kufuneka zisuswe ngotywala, oko kuya kunciphisa umngcipheko wokusuleleka.
Xa wonke umsebenzi ulungelelanisa umlo weehiyo zenziwe, unokucinga ngombala wazo. Ngaphandle kweengqungquthela zengqolowa, amaqabunga amancinane angabonakala angalunganga, okwenza ubuso bungabonakali ngokwaneleyo. Ubumnyama buyakwazi ukujonga ngaphandle kwendawo kunye nobutsha, ukunika ubuso ngobunzima. Umbala weenkibi kufuneka ube ngetoni-ezimbini elula ngaphezu kombala wezinwele ngokwawo. Kukho izithunzi ezikhethekileyo ezikunceda ukunika umbala umbala ochanekileyo, kwaye zichaneke ngokufanelekileyo ngebhashi. Ipensela kwezinye iimeko kunokubonisa imivimbo ekhangelekayo.
Njengeenwele, amaqabunga angabi nantoni na ukuba, ngokomzekelo, iinwele zifutshane kwaye azikwazi ukubekwa, ezithintela yonke inkqubo yokulungiswa kwazo. Ngenxa yale njongo, i-gel ekhethekileyo ye-eyebrow laying yaphuhliswa. Unokuphinda ukhankase ngendlela eya kusetshenzwa ngabaculi abazenzayo. Kufuneka ufefe iincinci ezincinci ngomnwe wakho kwaye ngokukhawuleza uphendule iinyawo zakho uze uphononshe iinwele zakho ngebhasi. Oku kuya kunceda ukugcina isimo esifanelekileyo seenki ngosuku lonke.
Iimpazamo eziqhelekileyo eziphazamisa iinki zakho
Indlela yokufaka ipencil ye-eyebrow
Ndingayigxininisa kakuhle njani iinki?
Indlela yokwenza iilebe ziqine?
Yakha amaconsi aphelileyo ubuso obunzima
Khetha uhlobo olugqibeleleyo kunye nokwenza iilishi ebusweni bakho
Isipho kumama ngoNyaka omtsha 2016: iingcamango ezingcono kwiSipho sonyaka omtsha
Indlela yokutya izithelo zetchi
Ukushiya okanye ukuhlala: ngaba kukho ikamva lobudlelwane bakho?
Iifayili zezilumkiso zeLaser, i-photorejuvenation
Jikela: ukubunjwa, iinzuzo kunye neepropati, isicelo kwiyeza
Iinqebhoko nge-tsholeta, ubisi olunamanzi kunye namantongomane
Ukuzilibazisa nokuzilibazisa kwabafundi
AmaSandwich kunye ne-tofu kunye neentsimbi
Ukubethela - into efanelekileyo kumama
Ukuphefumula ukuxelela ukuphumla
Isobho sePatato nge vermicelli
Inkukhu yesibindi, ifakwe nge-anyanisi
Ngaba kunzima ukuba umfazi asebenze njengomphenyi
Ukucoca amanqatha: imenyu yabasetyhini yokumisa umzimba
Ukupheka okumnandi kwezixhobo zaseNtaliyane